CCO – « Efa miparitaka ny valanaretina »: tovovavy 19 taona eny Isotry tratran’ny coronavirus | NewsMada
Manomboka mampanahy. Tranga iray teny Isotry koa ny nahazoan’ilay tovovavy 19 taona ny tsimokaretina Covid-19. Tafakatra fito izany izao ireo tratran’ny valanaretina, tsy anisan’ireo mpandeha avy any ivelany.
Nambaran’ny mpitondra tenin’ny CCO, ny Pr Vololotiana Hanta, omaly fa tsy hita eny amin’ny endrika ny valanaretina. « Efa miparitaka eny anivon’ny fiarahamonina ny coronavirus ka andraisantsika andraikitra bebe kokoa. Fero ny fotoana ivoahana ary araho avokoa ny fepetra », hoy izy. Nota­nisainy tamin’izany ny antontanisa farany fa mahatratra 59 ireo tratran’ny coronavirus, vita fitiliana teny amin’n Institut Pasteur (IPM). 52 amin’ireo mpandeha avy any ivelany, nody an-tanindrazana. Nijanona teto Madagasikara kosa fa tsy anisan’ireo mpandeha avy any ivelany ny fito amin’ireo nefa voan’izany valanaretina izany. Ani­san’izany ilay tovo­vavy 19 taona sy ilay zazalahy 13 taona, avy etsy Isotry. Samy nifanerasera amin’ireo efa voan’ny coronavirus.
Notsiahiviny fa tranga efatra ny afakoma­ly. Niampy io tovovavy avy etsy Isotry io izany.
Na izany aza, tsy ahitana soritr’aretina ny 47 amin’ireo 59 voan’ny coronavirus ireo. « Arahi-maso eny amin’ny hopitaly izy ireo. Misy efatra hafa kosa anefa sempotra… », hoy ihany ny CCO.
3 162 ireo mpandeha natao fitiliana TDR
Etsy andaniny, 11 ireo vita fitiliana amin’ilay fitaovana haingam-piasa TDR tamin’ireo toerana miisa 50 mahery, omaly atoandro. Anisan’izany ireo tany an-tokan­tranony sy ny teny amin’ny Cnaps Von­tovorona na koa ireo teny Ivato sy Ankorondrano. « Tsy maintsy natokana avokoa izy ireo ary holitina eny amin’ny IPM », hoy ny mpitondra tenin’ny CCO.
Ankoatra izany, 703 ireo ireo notiliana farany tamin’ny TDR, amin’ireo mpandeha avy any ivelany natao teny Ivato, omaly. Iray ihany ny mitondra ny tsimokaretina raha tsy ahitana izany ireo 703. Miisa 3 162 ireo natao fitiliana TDR amin’ireo mpandeha avy any ivelany ka 3 150 ireo tsy nahitana ny covid-19. Miisa 12 kosa ireo tratran’ny valanaretina. Efa nalefa notilina eny amin’ny IPM izy ireo ka ny 6 efa vita. Tsy nahitana soritr’aretina ny 3 raha voa kosa ny 3 hafa, tafiditra ao ana­tin’ireo efa nambaran’ny filoham-pirenena ireo tranga ireo.
Fidinana eny Ambondrona sy Isotry…
Manoloana ireo rehetra ireo, naka fanapahan-kevitra ny fitondrana ka hidina eny anivon’ny fokontany, indrindra amin’ireo ahiana ho nisehoan’ny fifampikasohana ka nampiitatra ny valanaretina. Anisan’izany ny eny Ambondrona sy Isotry… Hisy ny hetsika fanadiovana. Eo koa ny mpitsabo hidina eny ifotony handray an-tanana ireo miahiahy ny fahasalamany na koa fitilina TDR. Arahin’ny fizaham-pahasalamana maimai-poana izany.